Validator & Mpamorona
Application Validator (N/A)
Ny Bancc™️ dia mamorona sehatra manaraka Miaraha aminay amin'ny dia FinTech manaraka amin'ny taonjato. Ho an'ny vahoaka, ho an'ny vahoaka. Whitepaper Manakalo & Mividiana crypto amin'ny sara 0%. BanccDex™️ dia Exchange/Aggregator decentralisaire izay manangona ireo swap samihafa rehetra ao amin'ny tambajotra Binance Smart Chain (BSC), Ethereum (ETH) & Polygon ho fampiharana tokana. LAUNCH APP Docs Mahazoa hatramin'ny 500% APY amin'ny BanccStaking™️ BanccStaking ™ dia sehatra staking izay manolotra vault Beta, Alpha, Omega ary Valhalla. LAUNCH APP Docs BanccDAO™️ mandrisika ny vondrom-piarahamonina hanao fiovana, indray mandeha BanccDAO™️ dia Fampiharana fifidianana amin'ny fitantanana ifotony ho an'ny vondrom-piarahamonina Bancc™️ mba hanomezana tolo-kevitra sy handrefesana ny habetsaky ny soso-kevitra tadiavina. LAUNCH APP Docs Liana amin'ny fiaraha-miasa? Manatona anay anio dia handamina izay mahasoa ny roa tonta izahay Mifandraisa aminay Docs
Bancc dia orinasa Blockchain izay manomboka amin'ny famoronana ny sehatra ara-bola itsinjaram-pahefana manaraka amin'ny alàlan'ny famehezana ny elanelana misy eo amin'ny teknolojia efa misy miaraka amin'ny mety hisian'ny blockchain.
Vidio eto ny sBanc!
Mahafantatra antsika ny haino aman-jery malaza
Mety mahafantatra anay avy amin'ny...
Dingana iray isaky ny mandeha
Telo taona amin'ny fanamboarana
Ireo singa mifandraika amin'ny Bancc Ecosystem
Ny tsena eran-tany & cryptocurrency dia voafetra amin'ny safidy ara-bola lafo sy miadana ny fampiasana. Miala amin'ny tsena lehibe iray tsy voakitika. Amin'ny maha-fohy ho an'ny safidy tsara kokoa, izany no nifikitra taminay hatramin'izao…
Mandefasa vola eran-tany ao anatin'ny 1 segondra amin'ny alàlan'ny fampiharana mora ampiasainay
Fitantanam-bola & varotra
Atakalo mora foana ny kriptocurrency tianao indrindra amin'ny fampiharana mora ampiasainay
Mandoa vola amin'ny BancCard™️ na mandoa mivantana amin'ny poketra cryptocurrency. Ny volanao, ny safidinao
Amboary ny fivarotanao an-tserasera amin'ny tsindry vitsivitsy miaraka amin'ny tsenan'ny Bancc™️
Bancc™️ Vokatra & Serivisy
BanccSwap™️ dia fifanakalozam-paritra miaraka amin'ny fifanarahana marani-tsaina voamarina mba hanombohana ny fananganana liquidity ho an'ireo mpivady ho avy amin'ny marika Banc toy ny BUSD, USDT, WBNB na manome liquidity amin'ny famantarana rehetra ao amin'ny ecosystem Binance Smart Chain.
BanccYield™️ dia sehatra fiompiana vokatra voatokana ho anao amin'ny fambolena sBanc amin'ny fomba mora sy manentana. Omeo ny iray amin'ireo tsiroaroa ary mahazo valisoa amin'ny sBanc.
BanccCEX™️ dia fifanakalozam-barotra afovoany izay ahafahanao manao varotra hatramin'ny 160+ tsiroaroa miaraka amin'ny fanohanan'ny vola kripto hafa toy ny Bitcoin, Ethereum, Dash sns. BanccCEX™️ dia vokatra manan-danja ao amin'ny tontolo iainana Bancc™️ ary tsy hanolotra fotsiny. fahaiza-manao ara-barotra fa koa safidy fampindramam-bola / fampindramam-bola ho an'ny mpampiasa vola.
BanccAccount™️ dia ny kaontinao manokana ahafahana mijery mora foana ny fanananao fiat sy cryptocurrency. Alefaso ny BancCard™️ ary manomboka mitahiry sara amin'ny fifampiraharahana rehetra rehefa nametraka ny mari-pamantaranao tao amin'ny BancChain™️ ianao.
BanccNFT™️ dia ho ampahany manokana sy voafetra amin'ny NFT ho an'ny mpampiasa azy izay hanana karazana endrika endrika samihafa ho an'ny NFT manokana. Ny endri-javatra dia eo anelanelan'ny tsipika mialoha ny famandrihana ny karatra debit ho avy tsy misy sarany amin'ny varotra.
BanccPay™️ no vavahadin'ny fandoavam-bola ho an'ny vola fiat sy cryptocurrencies. Ekeo ny olona rehetra na aiza na aiza Visa, MasterCard, American Express sns ary afindrao ho azy amin'ny alalan'ny BanccCex™️ amin'ny fiat na cryptocurrency.
BanccMerchant™️ dia rafitra Point-of-Sale feno tanteraka mba hanomezana fahafaham-po sy fampitomboana mora ho an'ny mpivarotra rehetra hanaiky sy hanomboka hivarotra ny vokatra/seriny eran'izao tontolo izao, na an-tserasera na ivelan'ny aterineto.
Interoperable sy Scalable
Transactions amin'ny hafainganam-pandehan'ny tselatra & hatramin'ny 10,000 Transactions isan-tsegondra
Mahazoa $BANC amin'ny fihazakazahana
Ny vola madinikao, ny fahafahanao
Mifanova miaraka amin'ny fananana mihoatra ny 100 mahery
Fanaovana vahaolana tsotra
Namboarina ho an'ny olona rehetra
Ny iray amin'ireo zavatra inoanay dia ny hoe ny vola / mari-pamantarana Crypto rehetra dia tokony hanana fitaovana. Betsaka ny tetikasa tsy mahita an'io ampahany io fa tsy izahay. Ny $BANCC dia hampiasaina amin'ny sehatray hamahana olana iray tena izy ary izany no mampiavaka antsika.
Ny mpampiasa dia mividy Bancc ho azy.
Ny mpampiasa dia mandefa ny novidina
$Banc amin'ny mpampiasa irina
FIAT NA CRYPTO
Ny mpampiasa dia mahazo ny bancc ary afaka mifanakalo amin'ny fiat na crypto
aleony tanana na mandeha ho azy.
Voafaritra ny ho avy
Tsotra & raitra
Noforonina ny fahitana
Ny hevitra voalohany dia noforonina. Tianay ny hamorona vokatra ahafahan'ny fandoavam-bola miampita sisintany haingana, mora ary ambany indrindra amin'ny tsena. Ny fikarohana dia namintina fa ireo mpamatsy amin'izao fotoana izao dia manolotra serivisy efa lany andro, tsy azo ianteherana ary lafo be ho an'ny mpampiasa. Tonga tamin'ny fanatsoahan-kevitra izahay fa mba hanomezana zavatra tsara kokoa dia tsy afaka ny ho irery amin'ny saranga ara-toekarena ara-tsosialy manokana. Nanapa-kevitra ny hanavao sy hanavao ilay antsointsika ankehitriny hoe "sehatra".
Voankazo $50K natsangana
Nahomby tamin'ny fihodinana voa $50K izahay ary nahazo vola bebe kokoa hanombohana ny fampandrosoana ny sehatra. Tamin'ny faramparan'ny taona 2021 dia nanova anarana sy nohavaozinay ny teknolojia izay inoanay fa ilaina mba hamoronana sakana azo ampiasaina, mahomby ary tafiditra ao anatin'izany.
✅ – Varotra ampahibemaso amin'ny Binance Smart Chain(PinkSale)
✅ – Banky & Cryptowallet
🚀- Hetsika ara-barotra goavana (mitohy)
⚡️- BanccCEX™️ (Fifanakalozana foibe)
⚡️- Mifanaraka amin'ny milina virtoaly Ethereum
⚡️- Fifanakalozana crosschain
⚡️- Vavahadin'ny fandoavana
❇️ - Ho avy bebe kokoa…
⚡️- Rafitra momba ny varotra
Famoahana ny sehatra
⚡️- Ny sehatra farany miaraka amin'ireo vokatra rehetra etsy ambony dia ho fampiharana tokana
Momba ny Bancc
Izahay no antony hahatonga ny Crypto ho lasa mahazatra. Ny fahadisoan'ny indostrian'ny fandoavam-bola dia efa ho fahatsiarovana ny lasa. Fotoana izao ho an'ny crypto hanao izay natao ho an'ny crypto - hamaha ny olan'ny tontolo tena izy. Miaraka amin'ny vola madinika $BANCC sy ny endri-javatra rehetra miaraka aminy - mino izahay fa ny hoavin'ny indostrian'ny fandoavam-bola ary manasa ANAO amin'ny dia.
Mpanorina & Lehiben'ny Teknolojia
Niditra tao amin'ny habaka crypto hatramin'ny faha-13 taonany ary namorona ny orinasany voalohany niaraka tamin'i Benjamin tamin'ny faha-14 taonany, nanangana tranokala sy fampiharana. Manana fahalalana ara-teknika sy manan-danja indrindra amin'ny fampandrosoana blockchain, toekarena ary fotodrafitrasa amin'ny fananganana teknolojia avo lenta izy. Izy dia ampahany manan-danja amin'ny fananganana ny fahombiazan'ny Bancc.
Amin'izao fotoana izao i Benjamin dia atleta matihanina ary mpampiasa vola amin'ny fananana, tahiry ary crypto. Benjamin dia mpiara-miasa zandriny amin'ny casino crypto an-tserasera. Nanomboka ny orinasany voalohany i Benjamin fony izy 15 taona niaraka tamin'i Nils-Julius ary manana maso tsara amin'ny fahitana ireo fotoana tsy hitan'ny hafa.
Chief Financial manamboninahitra
Isak dia mpampiasa trano nahomby hatramin'ny faha-18 taonany ary ankehitriny dia tale jeneralin'ny orinasa mpandrafitra iray mahomby. Isak dia manana fahaiza-manao tsara mitsikera zavatra sy mijery zavatra amin'ny fomba fijery hafa. Miaraka amin'ny traikefa ara-toekarena lehibe sy ny fisainana mitsikera i Isak dia mahafantatra izay ilaina amin'ny fitantanana orinasa mahomby.
Oskar dia mpamorona stack feno tsy ho ela. Oskar dia manana maso tsara amin'ny famoronana sy famolavolana tranonkala, fampiharana ary izay rehetra miaraka amin'ny fizotran'ny fanaovana izany. Oskar dia ho fanohanana tsara amin'ny famoronana sy fitarihana ny fizotran'ny famolavolana ny sehatra Bancc.
Mirian dia fanampim-panampiana tsara ho an'ny ekipa, manana fahaiza-manao ara-barotra manakiana sy mahataka-davitra. Mirian dia hanangana, hampivelatra ary hikarakara ny varotra Bancc. Mirian dia miteny anglisy sy espaniola tsara ary miaraka amin'ny fahaizany amin'ny fiteny roa dia afaka manatona mpampiasa bebe kokoa ny Bancc miaraka amin'ny fanohanana, votoaty & media sosialy.
TC-Crypto dia manana traikefa lava amin'ny fikojakojana sy fananganana tambajotra amin'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra. TC-Crypto dia niaraka taminay ara-bakiteny hatramin'ny andro voalohany ary nazoto sy nafana fo tamin'ny tetikasa izy. Mahita hery lehibe izahay miaraka amin'ny fahalalany sy ny fahaizany ho an'ny ampahany amin'ny hardware/logiciel amin'ny blockchain.
Nick dia manana hafanam-po lehibe amin'ny crypto sy Bancc. Miaraka amin'ny fahalalany taloha momba ny varotra & fiaraha-miasa. Nick dia hifantoka amin'ny fampielezana ny fahatsiarovan-tena amin'ny tetikasa amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny varotra sy ny fitadiavana fiaraha-miasa lehibe.
Raza dia mpanoratra lahatsoratra tena tsara ary tena tia cryptocurrency ka nanomboka nanoratra momba izany izy. Avy any Pakistan, Raza no mpanoratra voalohany ho an'ny Bancc, hanavao ny vondrom-piarahamonina sy ny media sosialy momba ireo zavatra mampientanentana ho avy!
Ataovy azo antoka fa handray anjara sy handray anjara amin'ny fivoriana AMA isan-kerinandro!
Ahoana no ahafahan'ny Bancc™️ hifaninana amin'ny Crypto.com, Binance sns?
Ny hevitra fototra ao ambadiky ny orinasa mahomby rehetra dia mifantoka amin'ny tombombarotra mazava ho azy. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Bancc™️ sy ireo orinasa ireo dia ny te-hahazo fidiram-bola ambony indrindra ho an'ny tompon'ny orinasa ireo orinasa ireo ary ny mpanamarina azy ireo dia heverina ho mpiara-miombon'antoka amin'ny paikadin'ny orinasa sy ny modely fidiram-bolany. Ny Bancc dia mitondra karazana maodely fidiram-bola mitovy amin'izany fa ho an'ny maso "bahoaka". Ny fampihenana ny totalin'ny fidiram-bola ho an'ny Bancc ary ny fampitomboana izany ho an'ireo mpandray anjara amin'ny blockchain.
Ahoana no ahafahan'ny Bancc™️ manao ireo zavatra rehetra ireo?
Ny teknolojia dia ampahany mahaliana amin'ny evolisiona ary araka ny hitantsika tamin'ny Bitcoin, indrindra ny folo taona lasa. Manomboka mivoatra haingana kokoa noho ny teo aloha ny zava-drehetra. Bancc dia niorina tamin'ny finoana fa tokony ho azon'ny rehetra ny teknolojia ary tsy ny lalana inoanay fa mety ny manasarotra ny fifandraisan'ny mpampiasa. Amin'ny fampifandraisana ireo teknolojia efa misy manana tantara teo aloha izay mampiseho fahatoniana sy toerana ho an'ny fitomboana Bancc™️, dia ho afaka hanenjana ny elanelana misy eo amin'ny fitaovana banky mahazatra sy ny rivo-piainana cryptocurrency.
Nahoana no ilaina ny Bancc?
Miova izao tontolo izao ary mijanona eto ny cryptocurrency. Zavatra iray ihany, sarany. Raha jerena amin'ny mpampiasa ankapobeny ohatra dia mampiasa tolotra fandefasana vola. Ny sarany dia zavatra mitovy. Tsy misy olona te-hiasa maimaim-poana fa ny fandoavana sara ambony dia manimba ny mety ho fitomboan'ny tambajotra. Ny fandefasana 10$ sandany dia tsy tokony hitentina 60$ amin'ny fotoana voalohany. Ny sarambabem-bahoaka dia mila zavatra mora vidy sy mora ampiasaina noho ny tolotra omena ankehitriny. Ny Bancc™️ dia mamaha ity olana ity amin'ny fomba fitsinjaram-pahefana amin'ny famoronana toekarena salama sy maharitra izay tsy miankina amin'ny ampahany tokana, fa ny mpampiasa ankapobeny ao amin'ny tambajotra.
Misoratra anarana amin'ny gazetiboky anio.
Ataovy azo antoka ny mijanona hatrany amin'ny zava-mitranga ao amin'ny Bancc, ho eo na ho efajoro.
Amin'ny fisoratana anarana dia manaiky ny anay ianao Terms & Services.
Copyright © 2022 Bancc™️ | Powered by Bancc™️⚡️
Anarana famantarana - Bancc
Vidin'ny liquidity - 1%
Vidin'ny Buyback - 0% (Fandoroana tanana)
Vidin'ny fisaintsainana - 7%
Vidin'ny varotra - 3%
TOTAL FEO - 11%